A Complete Set of Tips to Increase Your Pay Per Pịa Advertising ROI | Martech Zone
Mgbe nke a ozi sitere na Datadial na-ekwu, maka obere azumahiaM ga-eme ihe n'eziokwu na anyị na ụfọdụ ụlọ ọrụ na nnukwu ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ na-adịghị eji ọtụtụ n'ime ndụmọdụ ndị a eme ihe! Nke a nwere ike ịbụ ndepụta zuru oke nke ndụmọdụ m hụgoro ma a bịa n'iji ụgwọ kwa Pịa na Google karịa nke ọma.
Agbanyeghị ụlọ ọrụ gị, usoro ị nwere ike iji mee ka ndụ dịrị PPC mfe ịbụ otu. Ihe omuma ihe omuma a (site na Datadial to you, with love) mebiri echiche 53 maka ugwo-ugwo-Pịa. Nzọụkwụ 53 iji mezuo ihe ịga nke ọma PPC maka obere azụmaahịa
Lezienụ kwa Pịa Atụmatụ
Isiokwu Matches - gwakọta usoro ọchụchọ sara mbara ma akọwapụtara nke ọma karịa oge.
mgbasa ozi - Gbalịa ajụjụ ọchụchọ dị iche iche na ijikọ mgbasa ozi.
mpi - Kedu ego na izi ozi nke ndị asọmpi gị na-eji?
Mgbakwunye Ad - Mgbatị na - eme ka itinye aka dị ukwuu ma ọ naghị efu ego ọzọ.
Mkpuru-Ogo-tail Key - na-efu ọnụ mgbe ụfọdụ, dị oke mkpa, ma na-eduga n'ịgbanwe mgbanwe ka ukwuu.
Keywords Dynamic - na-agbanwe agbanwe okwu gị na akpaghị aka na mgbasa ozi nwere ike ịbawanye mkpa na ntụgharị ntụgharị.
Egbula Clicks - jiri mkpụrụokwu adịghị mma iji zere njikọta na-enweghị njikọ na ndị ọrụ ọchụchọ agaghị ahụ mkpa.
ule - lelee data ahụ, gbanye ihe anaghị arụ ọrụ ma nụchaa ihe na-eme.
Ikike - Gbaa mbọ hụ na nsacha gị na ụda dabara na akara na ọdịnaya gị.
Ghọta Nchọgharị Gị na Nchịkọta Weebụ
Otutu ọwa - nyocha nyocha, ngosipụta, ịzụ ahịa, ekwentị mkpanaaka na vidiyo vidiyo.
ọnyà - zere usoro ọchụchọ ọchụchọ nke nwere ike ime ka ọnụ ahịa gị na njem gị dịkwuo elu, mana ọ gaghị eduga na ntụgharị.
Ọnọdụ - ma ọ bụrụ na ị na-agba ọsọ na mpaghara ma ọ bụ ọtụtụ azụmahịa dị na mpaghara, ntọala ntọala ezubere iche.
Demographics - gbadoro ndị na-ege gị ntị site na afọ, okike na njirimara ndị ọzọ.
mma omume - hụ na mgbasa ozi gị dị n’usoro ntuziaka.
data - weghara ọtụtụ data dị ka ị nwere ike imezi-gbanye usoro gị.
iche - dobe ụdị dị mkpụmkpụ ma dịkwa ụtọ.
Tụlee - nyochaa data gị iji chọpụta ohere.
Mgbasa ozi gburugburu, Mgbasa ozi Ngosipụta
Remarket - kpọtụrụ ndị ọbịa mgbe tehy've jiri saịtị gị wee pụọ.
Device - gbalịa ịchọta iche na ekwentị mkpanaaka, desktọọpụ ma ọ bụ abụọ iji mata ọdịiche.
Pịa Kpọọ - nye usoro na mgbasa ozi mkpanaka ịkpọ ozugbo site na mgbasa ozi.
Clickability - mee ka onyonyo gị bụrụ nke pịrị apị.
Ndị na-ere ere na Nyocha - gụnyere ogo na nyocha maka maka ntụkwasị obi dị elu.
URL - Gụnyere Keywords gị njikọ slugs.
Graphics - jiri mkpa ndịna-emeputa.
Speed - ịbawanye ọsọ ọsọ ga-eme ka akara mgbasa ozi gị ka mma.
anabata - hụ na ebe nrụọrụ weebụ gị na-anabata mobile ma ọ bụ ikiri desktọọpụ.
ndebanye aha - gbakwunye ndenye aha akwụkwọ akụkọ iji soro ndị ọbịa nwere mmasị na-emekọ ihe.
Optimization - belata ọnụ ọgụgụ nke clicks dị mkpa iji tọghata.
nleba - gosiputa akaebe na saịtị gị maka ikwere ntụkwasị obi.
Nke ahụ bụ ole na ole n'ime ndụmọdụ ndị dị mkpa karị, lee ihe ọmụma zuru ezu:
Tags: AdWordsadwords ndọtịAnalyticspịa foneelu njikarịchapịa ịkpọdatadialihe ngosidesktọọpụ ọdịda peejingosipụta mgbasa oziKeywords ikeụdị njikarịchaọnụọgụ mkpụrụokwuọdịdị alagoogle adwordsGoogle Analyticsinboundọdịda peeji nke njikarịchaezubere iche ebeogologo-ọdụ Keywordsmobile ọdịda peejipc mkpanakaotutu ọwaKeywords na-adịghị mmaihu peejiakwụ ụgwọ pịaakwụ ụgwọ ọchụchọakwụ ụgwọ nyochakwụọ ụgwọ kwa Pịappcppc mgbasa ozippc nyochappc mkpanaakappc ulena-emegharị ahụanabataNyochana-ere nyochatestimonials
5 Statistics Egosi Mobile Sales Ngwaọrụ na-ada ada arụmọrụ